Wasiirrada Maaliyadda Ee Dalalka Bariga Afrika Oo Soo Bandhigay Miisaaniyadda Sanadlaha Ah Ee Dalalkooda. | Caroog News
Wasiirrada Maaliyadda Ee Dalalka Bariga Afrika Oo Soo Bandhigay Miisaaniyadda Sanadlaha Ah Ee Dalalkooda.
Wasiirrada maaliyadda ee dalalka Bariga Afrika ayaa soo bandhigay miisaaniyadda sanadlaha ah ee dalalkooda. Wasiirrada Kenya, Tanzania, Uganda iyo Rwanda ayaa Barlamaannadooda u soo gudbiyey miisaaniyadda sanadka 2019/20. Kenya oo ugu badan ayey miisanayaddeedu tahay $30 bilyan, halka Tanzania noqotay $14 bilyan, Uganda $8.5 bilyan iyo Rwanda 2.8 bilyan ah. Soomaaliya oo sanadka dhammaadkiisa la soo gudbin doono ayaa lagu wadaa in miisaaniyadeenu noqoto $300 oo milyan. Kenya afarta dal Tanzania, Uganda, Rwanda iyo Soomaaliya oo la isku geeyey ayey ka miisaaniyad badan tahay.
Marka la isku geeyo tirada dadka ku nool afarta dal ee Tanzania 57. 31m, Uganda 42.86m, Rwanda 12.21m, Soomaaliya 14.74m, waxey gaarayaan 127milyan, halka tirada dadka Kenya ay tahay 49.7m. Itoobiya oo Gobolka ugu dad badan 105m ayaa miisaaniyadeedu $12.8 bilyan tahay. Labo jeer ayey ka miisaaniyad yartahay Kenya.
La iskuma hayo in ay Kenya tahay awooda dhaqaale ee Gobolka, laakiin su’aashu waxay tahay, maxaa Kenya inta kale ee deriska la ah ka horreysiiyey? Ma hannaanka dimoqaraadiga ahbaa? Ma sarreynta sharciga iyo garsoorka madaxa bannaan ayaa maalgashi badan u soo jiidaa? Ma in ay dowlad danaheeda raacata oo aan isku mashquulin in ay yeelato miisaan iyo saameyn siyaasad dibadeed baa? Ma adduunka ayaa deriskeeda uga eexda oo dhaqaale iyo hanti gooni ah geliya? Mise waa dal mudnaanta siiya dhismaha dadkiisa (human capital) oo soo saara kaadir karti wax soo saar leh? Mise waa intaa iyo in kale oo la isku geeyey?
Waxay noqotaba Kenya waa dal aan xoriyadda hortiis qaadannay oo aan weliba gacan ka siinay sidii ay xor u noqon lahaayeen. Haddaba hadii dareen dadnimo jiro waa in uu hinaaso ina galaa oo aan si daacadnimo leh oo dhab ah isku waydiinaa waxa asaageen naga reebay? Waxa ay miisaaniyadeenu $300 milyan u tahay, Kenyana $30 bilyan ka dhigay.
“Xikmada asaageen watee, xoogga lagu yeesho
Rag Allow maxaa naga xayiray, waa xujiyo yaabe”.